Budata Geometry Flail APK maka Android
Budata Geometry Flail
Budata Geometry Flail,
Geometry Flail bụ egwuregwu nka mkpanaka nke nwere ike riri ahụ mgbe ọ gbasịrị obere oge.
Geometry Flail, egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba ụrọ site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, na-akpọ gị òkù maka njem na-ama aka na-atọ ụtọ. Nime egwuregwu ahụ, anyị na-ejikwa dike nke nwere ụdị cube na anyị na-agbalị ịnweta ụzọ kachasị ogologo ma nweta akara kachasị elu site na imeri ihe mgbochi anyị na-ezute.
Geometry Flail nwere isi egwuregwu ụdị Flappy Bird. Negwuregwu ahụ, dike anyị nke nwere ụdị cube na-aga nihu mgbe niile, site na imetụ ihuenyo ahụ aka, anyị na-ahụ na ọ na-agagharị na-adaghị nala ma na-akụ ihe mgbochi. Oge ọ bụla anyị metụrụ ihuenyo ahụ aka, dike anyị na-ebili ntakịrị. Isi ihe na-egosi ọdịiche dị na Geometry Flail na egwuregwu nka yiri ya bụ na a na-emepụta ihe mgbochi ị na-ezute na egwuregwu ahụ na-enweghị usoro. Nikwu ya nụzọ ọzọ, ịkwesịrị iji ntụgharị uche gị nwa oge iji gafee ihe mgbochi ndị na-abịara gị. Tụkwasị na nke ahụ, anyị na-ezute ihe ịtụnanya dị iche iche nụzọ anyị. Bonuses nke na-agbanwe ntụziaka anyị na-aga nihu ma na-ebelata oge na-agbakwụnye obi ụtọ na egwuregwu ahụ.
Geometry Flail nwere usoro dị mfe yana enwere ike ịchịkọta ya dị ka egwuregwu mkpanaka na-atọ ụtọ.
Geometry Flail Ụdịdị
Mmepụta: Wonnered Games